Ulo | Ka 2022
Nke a bụ osimiri ebe Grace Kelly nọrọ oge ọkọchị nke 1956
2022 | ẸNam Ekese Paul Adams | Atiya: Ulo
Mgbe ọ na -ese High Society n'oge ọkọchị nke 1956, Grace Kelly nọrọ oge n'etiti ihe nkiri ya na Castle Hill Inn na Newport, Rhode Island. Anọla m izu ụka gara aga na Castle Hill-na nkwụsị Newport na Volvo Ocean Race, ebe ndị ọrụ ụgbọ mmiri (gụnyere naanị ndị otu SCA nke ụmụ nwanyị niile) na-agba ọsọ gburugburu ụwa. N'ime awa ole na ole, mgbe anyị na -anọghị n'obodo agbụrụ na -enyocha ụgbọ mmiri ndị dị ịtụnanya, anọ m n'ụlọ ndị ọbịa, ebe ahụrụ m otu nnukwu okwute okwute nke nwere steepụ nke ya raara onwe ya nye. N'ikpeazụ, e wuru steepụ ahụ maka Grace Kelly n'etiti narị afọ nke 20. Ebe ụlọ nkwari akụ ahụ na -akọwa mmekọrịta dị n'etiti onye nwe ihe nkiri: Mgbe ọ na -anọghị ezumike na Harbor House na Castle Hill, Kelly ga -agbada na okwute okwute ruo na nsọtụ mmiri. N'ebe ahụ, ọ ga -anwu n'elu nkume, gwuo mmiri n'akpa uwe, ma nọrọ naanị ya n'akụkụ ụsọ mmiri ya, ebe ndị na -achọ mkpụrụedemede enweghị ike inye ya nsogbu. Otú ọ dị, ịrị elu ahụ adịchaghị ka ihe na -atọ ụtọ; n'oge na -adịghị anya ndị ọrụ ahụ wuru steepụ ka o wee nwee ike iru ebe nzuzo ya n'ụzọ dị mfe. Ọ nọrọ ọtụtụ oge na gburugburu okwute nke na ndị ọrụ Castle Hill na ndị ọbịa malitere ịkọwa ya naanị
Igbe kacha mma iji mee ka ịhazi ngwa bụrụ nrọ
Amaghị m ihe ị ga -eme na nchịkọta ngwa gị? Igbe ọla kacha mma nwere ike inye aka. Site na drọwa ịkpakọba akpa akpa, zụọ ahịa nchekwa 12.
N'ime agbamakwụkwọ Billionaire Russia: Mma agha-mma agha, achicha nke ụkwụ 10, na akwa $ 600,000
Onye ọchụnta ego Russia Ilkhom Shokirova ahapụla ihe ọ bụla mgbe ọ bịara agbamakwụkwọ nwa ya nwanyị, Madina Shokirova. Emere na nkwari akụ Radisson Royal Congress Park nke Moscow, na mgbede ahụ gosipụtara ndị ọbịa 900, achicha 10-ụkwụ, na uwe $ 600,000.
30 Sandwiches na -atọ ụtọ dị egwu iri na ụbọchị Sanwichi mba na gafee
Anyị hụrụ sandwiches n'anya kwa ụbọchị na Glamour, (Ana m eri pb & j ka m na -ede nke a), mana taa anyị hụrụ ha n'anya ntakịrị n'ihi otu ezumike dị oke mkpa: Ụbọchị Sanwichi Mba. Iji mee mmemme, anyị achịkọtala ụfọdụ usoro nri Sanwichi kachasị amasị anyị, nke ị nwere ike ịnụ ụtọ site na nri ụtụtụ ozugbo site na ihe eji megharịa ọnụ-ọzọkwa mgbe agụụ na-agụ abalị. Lelee anya, mana gbaa mbọ hụ na ndị ọrụ ibe gị anọghị nso ka ha nụ ntamu afọ gị. Nri ụtụtụ: Sanwichi anụ ezi na àkwá na yabasị opi mmiri Frittata Sanwichi na mmanụ oliv Salad fọdụrụ Pancake Nri ụtụtụ Sanwichi French Toast Turkey Sanwichi na -a Salụ salmon Smørrebrød Prosciutto, Chiiz Ewuru, na Sanwichi Sanwichi Nri ehihie: Salad Egg ọhụrụ n'ime obere Pitas French Dip Sandwich Arugula, Mozza na Focaccia Caprese Mini Sandwiches Pesto Tuna Sandwiches Curry Egg Salad Sandwich Salade Nicoise Sanwichi Nri abalị: Best-Ever Sloppy Joe BOLT (anụ ezi, oporo, letus, tomato) Sandwiches Ice Cream Nutella na Raspberry Sandwiches Chocolate Ganache Sandwiches Ahụekere Ice Cream Sandwiches Frizen Chocolate Sandwiches Gingerbread na Chocolate Sandwiches N'abalị ikpeazụ: Griddled Mortadella na Cheese Cheesy Grilled Pizza Sanwichi The PPB (Chip Potato, Pickle, na Bacon) Grilled Cheed
7 agwaetiti Caribbean nzuzo ị ga -achọ idobe onwe gị
Agwaetiti Caribbean na -agụrịrị onwe ha maka mwakpo kwa afọ nke ndị ọbịa oyi. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ebe agaghị ada ada ịdọrọ ndị njem na narị puku kwuru puku, a ka nwere ọtụtụ mpaghara n'okpuru radar nke na-enye ihe niile site na isi obodo mara mma ruo mkpagharị n'oké ọhịa mmiri ozuzo-ha niile na-enweghị nkụda mmụọ nke igwe mmadụ. Ị nwere mmasị ịga leta osimiri Caribbean nke na -eche n'ezie dị ka nke gị? Gụọ n'ihu. Antigua na Barbuda N'agbanyeghị mmiri juru na ya, obodo nta mara mma ma weghachi ya, ụlọ akụkọ ihe mere eme, mba agwaetiti abụọ nke Antigua na Barbuda anọwo na-agafe ogologo oge maka nnukwu Caribbean. Nke ahụ nwere ike gbanwee n'oge na -adịghị anya: ụfọdụ ịdọrọ ndị njem ọhụrụ, V.C. Ọdụ ụgbọ elu mba ụwa Bird na-abịaru ngwụcha na mgbakwunye $ 100 nde, 247,569 square-foot; Ọrụ ọhụrụ JetBlue dị n'etiti JFK na agwaetiti ahụ malitere na Nọvemba 5, ụzọ Alitalia si Milan gaa Antigua na -eso na Disemba. Nakwa n'ọrụ? Ihe nkiri $ 250 nde site n'aka onye na -eme ihe nkiri Robert De Niro. Ihe ị ga -ahụ: Debe - ma soro mmiri gwuo mmiri na ebe obibi ebumpụta ụwa ha na Stingray City, wee banye n'ụlọ ndị nwe obodo na ọdụ ụgbọ mmiri Britain weghachiri eweghachi na ọdụ ụgbọ mmiri Bekee, bụ agwaetiti kacha ochie. Kitts na Nevis Ozugbo ụfọdụ agwaetiti 'kacha atọ ụtọ' maka ọmarịcha ha
Onyinye ngụsị akwụkwọ nke otu-zuru oke maka Social Butterflies
Nhọrọ nke onyinye ngụsị akwụkwọ maka onye gụsịrị akwụkwọ na -enwe mmasị ịmekọrịta na ime ememme.
Ihe 15 na -eme ma ị laa n'ụlọ maka ezumike
Enweghị nchekasị maka ọnọdụ aghụghọ ndị ahụ ị ga -abanye na ya - anyị na -eme mmemme ọma, na -enyere aka na -adịghị mma.
Otu esi akụ akwa (ka curtis Stone gosi gị)
Ịzụ àkwá bụ otu n'ime usoro ndị ahụ dị mfe nke ga -eme gị anya nke ukwuu na oge isi nri gị ozugbo ị matara ya. Jiri akwa eghere eghe nwere toast dị ka nri ụtụtụ dị mfe, mepụta nri ehihie ngwa ngwa site na itinye otu na muffin Bekee (ya na ube oyibo, parmigiano-reggiano, na nnu mmiri), ma ọ bụ mepụta efere dị iche iche na-akpọ otu (dị ka spaghetti carbonara- mma!). Nzọụkwụ ndị a ga-amata: 1. Weta mmiri ka ọ fọrọ obere ka obụpịa, tinyekwa mmanya gbara ụka abụọ (nke a na-enyere akwa ahụ aka ịhazi nke ọma). 2. Ịgbawa akwa n'ime nnukwu efere, wee jiri nwayọ mịba akwa ahụ n'ime mmiri ka ọ wee nwee ọdịdị ya. 3. Hapụ ya ka o were obere nkeji ole na ole, werezie ngaji wepu ya. Anyị nwere ike see onwe anyị ihe ngosi ka esi egbu akwa, mana anyị nwere mmetụta na ọ ga -akara gị mma ka onye isi nri Aussie Curtis Stone mee ya. Yabụ, n'atụghị egwu, ka esi akụ akwa.
Etu esi eme sofa ochie ka ọ dị ọhụrụ
Otu sofa dị - n'azụ ihe ndina gị - ọ ga -abụrịrị ihe kacha mkpa ị nwere. Ọ bụ ebe ị na -agbago ụkwụ gị mgbe ogologo ụbọchị gachara ọrụ, na -achụ nta maka marathon Netflix, wee nabata enyi gị mgbe ọ na -agbaba n'obodo. Mana ojiji kwa ụbọchị na -ebute oke nsogbu ya ma ka ọtụtụ afọ gachara, enwere ike belata sofa na -ahazi nke ọma ka ọ bụrụ ntụpọ anya na -adịghị. Ozi ọma a bụ na ị nwere ike ghara idobe nnukwu mgbanwe iji dochie ya - site na ndụmọdụ ndị a, ị nwere ike mee ka ọ pụta (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ) ọhụrụ na -enweghị imebi ụlọ akụ gị. 1. Tinye ohiri isi. Ọ bụrụ na ihe ndina azụ gị ahụla ụbọchị ka mma - ma bụrụkwa nke dị mma maka azụ gị - tụba ohiri isi na -arụpụta ebumnuche abụọ: Ha na -eme ka ọ dị ka nke ọhụrụ - ma ọ bụ opekata mpe kpuchie anya gị na -adịghị mma, akwa a na -eyi - ma nye gị ebe dị mma. zuru ike. Tinye nke ọma iji kpuchie ogologo sofa gị, ọ bụghị naanị abụọ n'akụkụ ọ bụla. 2. Agba ya. Ee, ị gụrụ nke ọma! Maka sofas nwere akwa mara mma, mgbe ụfọdụ, akwa mkpuchi ma ọ bụ akwa akwa bụ naanị ihe ịchọrọ iji mee ka ọ dị ọhụrụ. Ị nwere ike ịchọta nkuzi na Pinterest n'ụzọ dị mfe nke ga -eduga gị na usoro ọ bụla ịchọrọ
Zute nwa agbọghọ ahụ na -atụ egwu chiiz (njikọ: Enweghị nwa agbọghọ anyị maara nwere nsogbu a)
Ọtụtụ ndị ọrụ anyị na-adaba na ụdị chiiz-aholic. Anọ m na -eche maka chiiz ogologo oge mana ọ batara nke ọma na nso nso a, yabụ na pasent 100 anyị bụ eze na chiiz otu. Ma ọ bụghị nwa agbọghọ a dara ogbenye. Dị ka Daily Mail si kwuo, Melissa North dị afọ 22 na-atụ ụjọ chiiz. Ọ sịrị, 'Akpọrọ m ịga nso ihe ahụ nso, na ịhụ ka ndị mmadụ na -eri ya bụ ihe jọgburu onwe ya. N'ime akụkọ metụtara ya, anyị na -eche echiche ịmalite bred kọlụm nke izu n'izu na blọgụ Toast, yabụ lezie anya maka nke ahụ. Ọ gwụla ma, n'ezie, ị bụ Melissa North. N'ọnọdụ nke a, lepụ anya.
Akaụntụ 10 nke onye ọ bụla na -eri nri kwesịrị ịgbaso
Dị ka, ee, onye ọ bụla, ahụrụ m ụfọdụ agụụ ihe oriri n'anya na Instagram. Abụ m onye na -a forụ maka ọgwụgwọ ụtọ, ihe ọ bụla cheesy, na akwa nsen n'ụtụtụ Sọnde. Na dịka iwu n'ozuzu, onye na -anya ụgbọ ala, ka mma. Nke a bụ eserese eserese iri kachasị amasị m sitere na chefs, celebs, na ndị na-atọ ụtọ (n'ụzọ nkịtị!). Poteto ọhụrụ, @thenewpotato Ọhụrụ nduku emeghị ndepụta blọọgụ ejiji na nri ka anyị mara n'efu; Nwanne nwanyị Danielle na Laura Kosann nwere nnukwu anya maka ihe dị ọhụrụ na nri nri yana akwụkwọ nri. Daashi: Nri ha bụ nnukwu isi ihe maka ilebanye anya na ihe ga -abịa na blọgụ. Bon Appetit, @bonappetitmag n'ụzọ dị mfe otu n'ime ọkacha mmasị m na -eso, akara ngosi nwanne nwanyị Bon Appetit na -egosipụta ngwakọta zuru oke nke ihe ndị mara mma, nri na -adịghị mma, yana ee, akwa nsen. Lezienụ anya maka ọmarịcha ihe egwuregwu vidiyo ha. Dominique Ansel, @dominiqueansel Ị gaghị ahụ nri ụtọ dị egwu karịa nke ị ga -ahụ site na onye isi nri achịcha achịcha Dominique Ansel. Nke a bụ nwoke ahụ mepụtara cronut, ka emechara. (Ụdị nke March bụ mmiri ara ehi na mmanụ a honeyụ nwere shuga na-esi ísì ụtọ, ma ọ bụrụ na ị na-eche.) Lauren Conrad, @laurenconrad Ọ dị mma, ama m na m tinyekwara Lauren na ụdị ejiji Instagrams kachasị mma ịgbaso,
Wolfgang Puck Ntụziaka Salmon Pizza Smoked (Caviar, Nhọrọ!) Site na Spago
Mgbe ya na onye isi nri Wolfgang Puck ghọrọ onye na-eme mkpọtụ n'oge Oscars (ọ na-ebi ndụ-Instagrammed ụfọdụ ihe nkiri na-esite na ihe nkiri na nri anyị), anyị rịọrọ Puck ka o kerịta uzommeka mbinye aka site na ụlọ oriri na ọ Hollywoodụ Hollywoodụ Hollywood a ma ama, Spago. Ihe na -atọ ụtọ nke ukwuu, anyị kwuru. Ma nke a bụ ihe o ji lọta: Pizza a ama ama nke nwere salmon anwụrụ ọkụ na caviar, n'okpuru. Echere m ... wow. Ọ dịghị onye na -ekwu na ị ga -eji caviar - n'eziokwu, pizza a ga -atọ ụtọ ma ọ bụrụ na enweghị ya. Nke a bụ uzommebe dị n'okpuru-mee ka m mara ma ọ bụrụ na ị kwụsị itinye ya na ya: Pizza nwere salmon anwụrụ ọkụ na achịcha Pizza Caviar: na-ewepụta pizzas anụ ọhịa 4 8 na-arụ ọrụ ma ọ bụ yist ọhụrụ 1 mmanụ a 1ụ 1 iko mmiri ọkụ (105 ruo ogo 115) 3 iko ntụ ọka niile, 1 teaspoon kosher nnu 1 tablespoon mmanụ olive na-amaghị nwoke gbakwunyere agbakwunyere maka ntuziaka: N'ime obere efere, gbasaa yist na mmanụ a inụ na iko iko mmiri 1/4. Na igwekota nke dabara na nko ntụ ọka, jikọta ntụ ọka na nnu. Tinye mmanụ, ngwakọta yist, na iko mmiri 3/4 fọdụrụ na ngwakọta na obere ọsọ ruo mgbe mgwakota agwa na -abịa nke ọma n'akụkụ akụkụ nke nnukwu efere na ụyọkọ.
Nwanyị nsọpụrụ kwesịrị nsọpụrụ onye ọ bụla kacha mma kwesịrị ịma
Ma ị nabatala ọrụ ahụ ma ọ bụ mara na òkù MOH na -abịa, ndị ọkachamara anyị nwere iberibe ụmụ nwanyị nke nsọpụrụ ị gaghị agbaghara.
Otu esi eri nri dị ọnụ ala na Chipotle Site na ịtụpụ menu ụmụaka
Mbanye anataghị ikike Chipotle: Chekwaa ego site na ịtụ site na menu ụmụaka, nke ka na-enye oke oke maka ọkara ego nri okenye.
Ngwongwo ụlọ akwụkwọ 10 nke ga -eme ka ị nwekwuo agụụ
Onyinye sitere na ngwụcha '90s na mbido' 00s dị ezigbo mma maka ụlọ akwụkwọ. Anyị chịkọtara mmadụ iri n'ime ọkacha mmasị anyị, gụnyere ndị na -echekwa ọnyà na akwụkwọ mmado Lisa Frank.
Ezigbo Alụmdi na Nwunye: Alexandra na Jay
Ọmarịcha Newport a, agbamakwụkwọ mmiri mmiri Rhode Island nke emere na ihunanya Castle Hill Inn bụ ihe dị mkpa New England.
Echiche ọzọ Housewarming Party: Nabata Waffle Brunch
Ebe ọ bụ na mụ na Sean abịabeghị ụlọ nke ukwuu kemgbe anyị kwagara na Eprel, anyị enweghị ike ịchọta oge ịnabata oriri ụlọ nke ụlọ anyị kwesịrị n'ezie. Ozugbo anyị nyechara ihe ma hụ na ọ nwere 'ibi n'ime' ntụsara ahụ, anyị chepụtara oriri zuru oke wee zipụ akwụkwọ ịkpọ oku. Ememe ụlọ anyị 'Wafflowe' dị ka isiokwu kachasị dabara maka ndụ anyị yana iji gosipụta ọmarịcha ụlọ anyị mara mma. Mee atụmatụ ka nri bụrụ kpakpando n'ihi na ndị ọbịa dị egwu, ahụmịhe ịchọrọ ga -esochi. Nke a bụ ndụmọdụ m maka otu esi atụ nnukwu oriri ọffleụ waụ waffle: 1. Hazie ọdụ. A ga -enwerịrị ebe a na -edobe ihe (kichin), ihe ọ drinksụ (ụ (nso ebe onye ọ bụla ga -anọpụ), na nri nri nri (ikekwe ebe onye ọ bụla ga -anọpụ). N'ụzọ ahụ, ọ gaghị enwe oke mkpagide ma ndị ọbịa gị nwere ike isonyere igwe mmadụ dị iche iche. 2. Nweta ndị enyemaka. Ọchịchọ a na -achọ àkwá, anụ ezi, na waffles fụrụ afụ. Kenye onye dị njikere inye akwa na anụ ezi n'oge nnọkọ ahụ na onye dị iche iche ịme waffles. Ndị ọbịa gị ga -achọkwa njem nlegharị anya - ọ bụ oriri ụlọ mgbe emechara - yabụ gbaa mbọ hụ otu
Onyinye ụbọchị-ụdị nke nne maka nne nke ahaziri nke ọma
Maka nne nke kpọrọ ọgba aghara asị ma na -achọ usoro na nhazi, nke a bụ nhọrọ nke onyinye ụbọchị nne.
Akụkụ 7 na -atọ ụtọ na Airbnbs kacha ewu ewu n'ụwa
Pinterest bụ oghere oke bekee nke mkpali ime mmụọ-nke anyị ga-ada ọbụna gbadawanye ala, ekele maka ọmarịcha ndị a (ma ama ama nke ukwuu!) Airbnbs sitere gburugburu ụwa. Onye ọ bụla na-abịa zuru ezu na ịnwụ-maka njirimara nke ga-eme ka ị nwee anyaụfụ ezigbo ụlọ. ndị a bụ atụmatụ asaa kachasị ịtụnanya site na Airbnbs kacha elu n'ụwa.
iPhone Hack: Akara Apple dị na azụ bụ bọtịnụ
Otu onye ọrụ TikTok kpughere na ọ ga -ekwe omume ịhazi akara Apple n'azụ iPhone iji were nseta ihuenyo, gbanwee olu ma ọ bụ kpọchie ihuenyo gị.
Ubi Pụrụ Iche
mmetụta na -adịte aka nke ndị na -etinye egbugbere ọnụ
ihe kacha mma maka ntu ntu maka okporo ụcha
kinky ihe maka di na nwunye na-eme
kacha mma elu-waisted jeans maka curvy ahu